မြန်မာနိုင်ငံတွင် မြောင်းမြတံတား အပါအဝင် ကြိုးတံတားအစင်း ၃ဝ ရှိနေ၊ ကျန်ကြိုးတံတား ၂၉ စင်း၏ - Yangon Media Group
မြန်မာနိုင်ငံတွင် မြောင်းမြကြိုးတံတားအပါအဝင် ကြိုးတံတားအစင်း ၃ဝ ရှိပြီး ကျန် တံတား ၂၉ စင်း ရေရှည်တည်တံ့ခိုင် မြဲရေးအတွက် ဂျပန်အင်ဂျင်နီယာ များနှင့်တရုတ်အင်ဂျင်နီယာများ ပူးပေါင်းစစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ် ကြောင်း ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီး ဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်လိုက် သည်။ ဧပြီ ၄ ရက်တွင် ဆောက်လုပ် ရေးဝန်ကြီးဌာနက ယင်းတံတား နှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန် ချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
လက်ရှိအသုံးပြုနေသည့် တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များ အတွင်း ရှိကြိုးတံတား ၂၉ စင်းကို ပြည်သူများအနေဖြင့် စိုးရိမ်မှုမရှိကြ ရန်နှင့် ယင်းကြိုးတံတားများပေါ် တွင် သတ်မှတ်ခံနိုင်ဝန်ထက်ပိုမိုတင် ဆောင်ကာဖြတ်သန်းခြင်းမပြုကြ ရန်၊ သတ်မှတ်အရှိန်နှုန်းအတိုင်း သာမောင်းနှင်ခြင်းဖြင့် ပူးပေါင်းကူ ညီထိန်းသိမ်းပေးကြရန် ယင်းထုတ် ပြန်ချက်တွင် မေတ္တာရပ်ခံထားသည်။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးလမ်း ပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးဝင်း ဌေးက”ဒီထုတ်ပြန်ချက်က နိုင်ငံ တော်အဆင့်ထုတ်ပြန်ပေးတဲ့ ထုတ် ပြန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်တို့တိုင်းအ ဆင့်ထက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအ ဆင့်ကကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်နေ တာဖြစ်ပါတယ်”ဟုပြောသည်။ မြောင်းမြကြိုးတံတားကျိုး ကျမှုကို စစ်ဆေးရာကွန်ကရစ်ကြိုး ထိန်းခုံ၏အတွင်းပိုင်းကွန်ကရစ် ထဲတွင် ထည့်မြှုပ်နှံထားသောသံ မဏိကြိုးများဆွေးမြေ့ပြီးကြိုးပြတ် ၍ တံတားကျိုးကျပျက်စီးခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်း အဆိုပါထုတ်ပြန် ချက်တွင်ပါရှိသည်။
မြောင်းမြကြိုးတံတားကို ၁၉၉၄ ခုနှစ်ကတည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် ဖွင့်လှစ်အသုံးပြုခဲ့ကာ ယခု အခါတံတားသက်တမ်းမှာ ၂၂ နှစ် ခန့်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါတံတားတည်ဆောက် စဉ်ကပင် တန်ချိန် ၈၅ဝဝ အလေး ချိန်ရှိသော ကွန်ကရစ်ကြိုးထိန်းခုံနိမ့် ကျမှုဖြစ်ခဲ့၍ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ရ သော တံတားဖြစ်ပြီး မြောင်းမြဘက် ကမ်းရှိ ကွန်ကရစ်ကြိုးထိန်းခုံနိမ့်ကျ မှုကြောင့် တာဝါတိုင်သည်မြစ်၏ ဆန့် ကျင်ဘက်သို့ (၁၁) လက်မစောင်း ရမည့်အစား မြစ်ဘက်သို့ ခုနစ် လက်မစောင်းနေ၍ တည်ဆောက် ပြီးစီးချိန်မှစကာ နှစ်စဉ်စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။ တံ တားသက်တမ်းနှစ် ၂ဝ ပြည့်သည့် ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်မှစ၍ လစဉ်စစ်ဆေးမှု များပြုလုပ်ခဲ့ပြီး တံတားကြမ်းခင်း များ၊ မူလီများ၊ Expansion Join အမျာ၊း Suspender Rod များမ ကောင်းလျှင် လဲလှယ်မှုများကိုချက် ခြင်းပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ဆောက်လုပ် ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ထုတ်ပြန်ချက် တွင်ဖော်ပြပါရှိသည်။
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘဏ္ဍာ နှစ်မှစ၍ လက်ရှိကျိုးကျခဲ့သည့်ကြိုး တံတားနှင့်အပြိုင် ဂျပန်နည်းပညာ ဖြင့် တည်ဆောက်မည့် တံတား အသစ်တစ်စင်းကို ဂျပန်အင်ဂျင် နီယာပညာရှင်များနှင့်ပူးပေါင်းတည် ဆောက်လျက်ရှိပြီး တည်ဆောက် ချိန်ကာလမှာတစ်နှစ်ခန့်ရှိခဲ့ပြီဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။။ အဆိုပါတံတားသစ်၏နည်း ပညာအရတည်ဆောက်ချိန်မှာ သုံးနှစ်ခန့်ကြာမြင့်မည်ဖြစ်သော် လည်း ယခုအခါလမ်းပန်းဆက် သွယ်အခြေအနေအရ တံတားအ သစ်တစ်စင်းအမြန်လိုအပ်နေခြင်း ကြောင့် တံတားအသစ်ကိုတစ်နှစ် အတွင်းပြီးစီးအောင် တံတားအမျိုး အစားပြောင်းလဲဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက် တွင်ဖော်ပြပါရှိသည်။
မြန်မာ့ကြယ်လိပ် မျိုးမတုံးစေရန် မင်းစုံတောင်ဘေးမဲ့တောမှ နည်းလမ်းလေးသွယ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ေ??
ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီ အရပ်ဘက် ဝန်ထမ်းများကို မလေးရှား ဝန်ကြီးချုပ် နာဂျစ် လစာ ဒေါ်လာ ၃၇၈ သန်??
Zedd နဲ့ ကေတီပယ်ရီတို့ရဲ့ ၃၆၅ သီချင်းဗီဒီယို ထွက်ရှိလာ